Wiricheya Inowanikwa Zvekunze Zvekuita | Karman® Mawiricheya
Posted on Dai 26, 2017 November 20, 2020 by Emma Louie
Kungoti iwe wakasungwa kune iyo wiricheya hazvireve kuti iwe unosungirwa kugara mumba. Pazasi pane wiricheya inowanikwa zviitiko zvekuita uchinakidzwa nekunze.
Zvinogona kunzwika senge chiitiko chakaoma kuita asi kukwirisa chinhu sosi huru ye kusimbisa muviri tichifarira zvakasikwa. Tarisa uone yedu Wiricheya Inosvikika Hiking Miedzo blog post kuti uwane nzira dzekukwira pedyo newe.
Paddle boarding chiitiko chekunze kwaunoshandisa surfboard hombe kumira pamusoro kuti urove bhodhi. Iwo mawiricheya kufambidzana nekuda kwekugwinya kwavo. Ichi chiito chikuru chekuita kunyanya muzhizha.
Ruoko kuchovha ndiyo inonyanya kuchinjika zviitiko zvekunze. Inosiyana mukugadzirwa, izvo zvinoita kuti ive kufambidzana kune vanhu vane zvese mhando of kufamba kurambidzwa. Unogona kufamba nekumhanya kwakanyanya kana kunakidzwa nekufamba famba. Icho chiitiko chinonakidza chekuita neshamwari,
Kufamba nechikepe kunokutendera kuti unakirwe nemhepo uye kufamba kwemvura. Icho chinonyanya kumusoro simba remuviri chiitiko kwaunofamba nechikepe chechikepe nesimba remhepo. Akaremara Mitambo inopa ruzivo rwakakura nezvechikepe.
Maitiro Ekutarisana nekushomeka kwekufamba